Mushure mekusiya Project Astoria, Microsoft yanga ichitsvaga nzira dzekuunza maapplication eApple ku Windows 10 uye yatove yakagonesa kutsigira rutsigiro kuburikidza neYako Runhare app yekusarudza Samsung mafoni.
Pfungwa yazvino yeMicrosoft ndeye "Project Latte", iyo inotarisira kubatsira vanogadzira kupakata yavo nharembozha seMSIX uye inogonesa rutsigiro rwechinyakare rweiyo Android subsystem. Iyo purojekiti yakavakirwa pamusoro pe Windows Subsystem yeLinux uye ichatanga kutsigira maapplication akaburitswa nevagadziri mu Windows Chengeta.
Kana iro zano rikaitwa rinogona kubatsira kugadzirisa iro risingazivikanwe "gwanza reapp" reiyo Windows Chengetedza uyezve uvandudze ruzivo rweChitoro pa Windows 10 ARM uye Windows 10X.
Takange tanzwa makuhwa sekutanga kutanga kwaGumiguru gore rapfuura kuti Microsoft yanga ichishanda pane anotsiva Project Astoria, asi isu hatina humbowo hunooneka hwekudzorera izvi.
Android maapplication kuburikidza nefoni Yako app
Nekudaro, chirongwa ichi chichiri munzira uye zviri pachena kuti hachina kukanzurwa. Muchokwadi, iko kuongorora kwekutanga kwechinhu ichi kunogona kuburitswa muhafu yepiri yegore rino. Kupa inoenderana neApple app kuenderana, Microsoft inorongawo kutsiva Google APIs ne Windows APIs pazvinogoneka.
Kusiyana neProjekiti Astoria, Project Late uye yakabatana Linux-based sub-system ichave iri kumberi kumberi nerutsigiro rwe Windows 10 features.
Izvo zvinobvumidza vanoshandisa-kumagumo kurodha pasi Android maapplication pane desktop yavo. Kuti uite kudaro, iwe unozofanirwa kuvhura Developer Zvigadziriso uye kugonesa yekuvandudza nzira, uye wozoendesa iyo yaunoda app.
Nekudaro, maapplication akaita seGmail, Mapikicha uye Play Chitoro, ayo anovimba zvakazara pakubatana kweGoogle Play Services, haashande Windows 10.
Android maapplication kuenderana pa Windows 10
Mazhinji mafaera eAPP anotarisirwa kushanda pasina kushandurwa uye kushingirira kudiki kwaizodiwa kuunza maapplication eApple kune desktop desktop system
Nekudaro, mamwe maapplication haamhanye nemazvo, nekuda kwemamiriro ekugadzirisa skrini, kushomeka kweGoogle Play masevhisi, uye kupunzika kana uchishandisa keyboard.
Project Latte parizvino iri kutarisirwa kuenda kunorarama mukutarisa kwekuvaka gare gare gore rino uye inogona kuchinja iyo Windows Chengetedza mufananidzo munzira hombe.
The post Native Android app tsigiro ye Windows 10 ichiri munzira yekutangisa kwe2021 yakatanga kutanga Windows tsva
Filed Under: Windows Tagged With: Mobile app, Windows 10